संस्कृतिको अर्थ उत्तम वा सुध्रेको स्थिति हो । कुनै भावना वा विचारबाट संस्कृत हुनु र यसले कार्यरूप लिनु संस्कृति हो । सभ्यताले मनुष्यको भौतिक क्षेत्रको प्रगति सूचित गर्दछ भने संस्कृतिले भौतिकताभन्दा बढी मानसिक क्षेत्रको प्रगतिलाई सङ्केत गर्दछ । सभ्यता र संस्कृति पूरै एकापसमा पृथक नभए पनि पूर्णरूपमा एउटै पनि होइन । वास्तवमा संस्कृति कुनै समाजमा गहिराइसम्म व्याप्त समग्र स्थिति हो । समाजको सोच्ने, विचार गर्ने, अभिव्यक्त गर्ने, कार्य गर्ने, खाने, पिउने, बोल्ने, नृत्य गर्ने, गाउने, चित्र बनाउने, घर बनाउने, मूर्ति बनाउने, साहित्य सिर्जना गर्ने आदिको सम्पूर्णतालाई संस्कृति भन्न सकिन्छ । संस्कृति भन्नु नै व्यापक जीवनशैली वा जीवनपद्धति होभन्दा अत्युक्ति नहोला कि ? यसैले दीर्घकालदेखि चलिआएको वा अपनाइएको पद्धतिहरूको समष्टिलाई संस्कृति भनिएको पाइन्छ ।
कुनै निश्चित ठाउँको आप्mनो अस्तित्व उसको संस्कृतिले नै दर्शाउँछ । दीर्घकालको जीवनपद्धति मानिएकोले यसले आपूmमा इतिहास पनि ओगटेको हुन्छ । तर इतिहास मात्र चाहिं संस्कृति होइन वा हुन सक्दैन । सामान्य दृष्टिमा इतिहास भनेको विगतका घटनाहरूको पुनर्अध्ययन हो । यहाँ घटनाको अर्थगत सम्बन्ध कुनै राजनीतिक घटना नभएर समाजमा देखा पर्ने प्रभावपूर्ण हरेक सानातिना परिवर्तन हो । यसले संस्कृतिको विगतलाई पनि समेट्छ ।
सन्दर्भ गढीमाई मेलाको हो । गढीमाई मेला भन्नेबित्तिकै नेपालको बारा जिल्लाको वर्तमान महागढीमाई नगरपालिकाको बरियारपुरमा रहेको गढीमाई मन्दिरमा हरेक पाँच वर्षमा लाग्ने मेलालाई बुझिएको पाइन्छ । एकै ठाउँको बुभ्mने संस्कृति बनिसकेको छ तर यस बुझाइमा अब स्थानीयरूपमा बिस्तारै परिवर्तन भइरहेको छ । बुझाइमा भएको एउटा हस्तक्षेपले एकचोटि राजनीतिक तरङ्ग ल्याएको थियो । वर्तमान जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका बन्नुभन्दा पहिले जीतपुरमा रहेको गढीमाई मन्दिरको नामबाट त्यस स्थानीय तहकै नामकरण गढीमाई गरिएको थियो । अनि बरियारपुरको नेतृत्वमा नामसँग अस्तित्व वा संस्कृति जोडेर एउटा तरङ्ग सिर्जना गरिएको थियो । पछि पुनर्संरचनामा बरियारपुरसमेतको स्थानीय तहलाई महागढीमाई नामकरण गरियो, जसले सर्वस्वीकार्यता प्राप्त ग¥यो । यससँगै रौतहटमा पनि एउटा स्थानीय तहको नाम गढीमाई राख्ने काम भयो । बरियारपुरको गढीमाईको मन्दिर र पूजा सबैतिरको दृष्टिमा ठूलो मानिन्छ ।
माथिको प्रसङ्गले गढीमाई मन्दिर तथा मेला लाग्ने स्थान अन्यत्र पनि छ भन्ने पुष्टि गर्दछ । बारामैं महागढीमाई नपाको बरियारपुर र मधुरीगढी, जीतपुरसिमरा, कलैया उपमहानपाको सिहासनी र पचानपुर, कोल्हवी नपाको बेल्वा, बारागढी गापाको दौर्वाविशुनपुर्वा लगायतको स्थानमा कतै मन्दिर बनाइ र कतै यत्तिकै स्थान बनाएर मेला लगाइ पूजा गर्ने गरिन्छ । यसैगरी, रौतहटको गढीमाई नपाको सुन्दरपुर, हर्दिया र बलुवामदनपुर गरी तीन ठाउँमा, कटहरिया नपाको दुधियाभार, गुजरा नपाको कनकपुर, वृन्दावन नपाको गढीटोल, गरुडा नपाको गेडहीगुठी र गम्हरिया, माधवनारायण नपाको माधोपुरका साथै सर्लाही जिल्लाको बलरा नपाको मिर्जापुर, रामनगर गापाको छोटौल र खैर्वा, कविलासी नपाको जमुनियालगायतका स्थानमा कतै मन्दिर स्थापना गरी र कतै स्थान बनाइ पूजा गर्ने र मेला लगाउने हुँदै आएको छ ।
बारा, रौतहट तथा सर्लाहीको विभिन्न स्थानमा स्थापित गढीमाई मन्दिरमा पूजा गर्न पुग्ने श्रद्धालुहरूले गर्दा मेलाको विस्तार हुँदै गइरहेको छ । मेलाको विस्तार हुँदै गएर बरियारपुरको गढीमाई मेला अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बन्न पुगेको छ । ज्यादै व्यापक क्षेत्र ओगट्ने, लाखौं मानिस मेला भर्न आउने, लाखौंको सङ्ख्यामा बलि चढाइने हुनु मेलाको स्थापित विशेषता भइसकेको छ । यिनै कुराले यसलाई विश्वमा चिनाउँदै लगेको छ ।
अघिल्लो मेलाको वर्ष गढीमाई मेलामा आउने भारतीय श्रद्धालुले आपूmसित बलिको लागि ल्याउने पशुमाथि यस वर्षभैंm रोक लागेको थियो । अहिलेसम्म बारा, रौतहट र सर्लाहीका विभिन्न ठाउँमा गढीमाई मन्दिरको स्थापना भएको र पूजा भइरहेको पाइएको छ र सिमाना जोडिएको भारतको कुनै पनि स्थानमा गढीमाई मन्दिर स्थापनाको जानकारी आएको छैन तर सबैतिरको स्थानीयमा बढ्दो श्रद्धा तथा नजीकमा नै पूजा गर्ने प्रवृत्तिको विकासले निकट भविष्यमा पनि भारतीय सीमावर्ती जिल्लामा गढीमाई मन्दिर स्थापना र पूजाको साथै मेलाको खबर आउन सकिने आधार अनुमान गर्न सकिन्छ ।
बरियारपुरमा हरेक दिन गढीमाई मन्दिरमा पूजा गर्ने चलन भइसकेको छ । मुख्यगरी शनिवार त भीडभाड नै हुने गरेको छ । अन्य स्थानका मन्दिरमा पनि अन्य दिन पूजा हुने गरेको र शनिवार अलिक बढी मानिसको आवागमन हुने गरेको देखिन्छ । मन्दिरमा पूजासँगै विवाह गर्ने चलनको पनि विकास हुन थालेको छ । मुख्य पूजाको समयमा अनेक पशुबलि दिने गरिएको भएपनि अन्य दिनमा मुख्य बलि भने नरिवल हो । सामान्यतया हरेक दिन नरिवल चढाइन्छ ।
पाँच वर्षमा विशेष मेला लाग्नु एउटा विशेष संस्कृति बनिसकेको छ । दिनहुँ पूजा गर्ने र नरिवल तथा अन्य मिष्ठान्न चढाउने कामले एक किसिमको जीवनपद्धतिको रूप लिंदैछ । मन्दिरमा विवाह गर्ने चलन बढ्नु तथा अन्य सांस्कृतिक उत्सवमा मन्दिरलाई सम्झिनुले शुभकार्यमा गढीमाई मन्दिर वा पूजाको संस्कृतिको नवमान्यता स्थापित हुँदैछ ।
गढीमाई मेलासित जोडिने एउटा राजनीतिक व्यङ्ग्य छ । यस व्यङ्ग्यले यति रूढता प्राप्त गरिसकेको छ कि लोकले सजिलै पचाएको छ र राजनीतिकर्मीहरूलाई झटारो हान्न पुगेको छ । त्यो व्यङ्ग्य के हो भने जो राजनीतिकर्मी चुनाव जितेर गाउँ वा आप्mनो क्षेत्र फर्किंदैनन् उनलाई चुनावमा देखेपछि गढीमाई भन्दछन् । अर्थात् पाँच वर्षमा गाउँ फर्किने नेता भनेका गढीमाई हुन् । गढीमाई मेला पाँच वर्षमा लाग्ने गर्दछन् र गढीमाईको दर्शन गर्ने संस्कृति चाहिं पाँच वर्षमा हो । यसले संस्कृतिमा गढीमाईको साङ्केतिक संस्कृतिलाई दर्शाएको छ ।
पहिले खासै गीत–सङ्गीत प्रचलनमा रहेको नपाइए पनि आजभोलि आधुनिक गीतमा यस स्थान, पूजा र मेलाले विशेष स्थान पाउँदै गएको छ । एलबमको निर्माण हुन थालेको छ । यस मेलाको संस्कृति र यसको सांस्कृतिक प्रभावको प्राज्ञिक क्षेत्रमा चर्चा हुन थालेको छ । पत्रपत्रिका, एफएम रेडियो, टेलिभिजन तथा सामाजिक सञ्जालमा अन्य ठूला सांस्कृतिक उत्सवजस्तै यसले स्थान पाउन थालेको छ र विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सहानुभूति पनि मेलाले पाउन थालेको छ । यी कारणहरूले गर्दा यसको सांस्कृतिक जरो निरन्तर बलियो हुँदै गइरहेको स्पष्ट हुन्छ ।
यसले संस्कृतिको रूपमा कसरी स्थान बनाउँदै लगेको छ भने सबै ठाउँमा एकै दिन र एकै किसिमले पूजा हुन्छ । मेला लाग्छ । पूजाको विधिमा खासै कुनै भिन्नता छैन । पूजाको मान्यतामा पनि कुनै पार्थक्य रहेको पाइन्न ।
अन्य संस्कृतिले जस्तै गढीमाईको मेला, पूजा, मन्दिर निर्माण तथा भाकल र सपनाका अनेक लोकोक्ति, किंवदन्ती तथा मिथकहरू बिस्तारै प्रचलनमा आइरहेका छन् । फलिफापका अनगिन्ती कथाहरू यत्रतत्र सर्वत्र सुन्न सकिन्छ । यसले साँच्चै गढीमाईले यस क्षेत्रको सामाजिक संस्कृतिको रूपमा आप्mनो स्थान सुरक्षित गर्न पुगेको स्पष्ट हुन्छ ।
साहित्यको सम्मान र महाकवि देवकोटा
नेपाली साहित्यमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई मानिएको छ ।
देवकोटाको जन्म २७ कात्तिक १९६६ मा काठमाडौंमा भएको हो । त्यो वर्ष त्यस दिन लक्ष्मीपूजा थियो । तराई मधेसमा दीपावली र अन्यत्र लक्ष्मीपूजा भनेर त्यत्ति बेला चिनिने यो पर्वकै दिन राति लक्ष्मीको पूजा गरिसकेपछि जन्म भएकोले लक्ष्मीको प्रसाद मानेर यिनको नाम नै लक्ष्मीप्रसाद राखिएको थियो । कालान्तरमा यिनी लक्ष्मीप्रसाद बन्नुभन्दा सरस्वतीप्रसाद बन्न पुगेका थिए ।
देवकोटाको जीवन निकै उतारचढावपूर्ण रहेको थियो । धनको लागि कहिल्यै उनी मरिहत्ते गरेनन् । आप्mनो आदर्श बनाए लेखनको मर्मलाई । मानवतावादका उनी आपैंmमा उदाहरण थिए । मानिसलाई नै देवता मान्दथे । ईश्वरमाथि विश्वास थिएन भन्ने होइन । दुःखी र पीडितको भावमा ईश्वरको बोली हुन्छ भन्ने उनका रचना र जीवनदर्शन तथा व्यवहारले अन्य धेरैलाई पनि मानवतावादको बाटोमा डो¥याउन सफल भएका थिए ।
देवकोटाले साहित्यका प्रायः सबैजसो विधामा कलम चलाएका छन् । उनको लेखनीको जादूले तत्कालीन विश्वका साहित्यकारहरू मोहित भएका थिए । एकजना प्रसिद्ध भारतीय साहित्यकारले देवकोटाको प्रतिभाको प्रशंसा गर्दै भनेका थिए– पन्त, प्रसाद, निरालाको समन्विति देवकोटा हो । त्यति बेला भारतमा छायावाद उत्कर्षमा थियो । बङ्गाली कवि रवीन्द्रनाथ टैगोरको छायावादले भारतमा निकै चर्चा पाएको थियो । पाश्चात्य साहित्यमा भने रोमान्टिज्मले केही दशकदेखि प्रभुत्व जमाएको थियो र भारतमा तत्कालीन अवस्थामा रहेको ईश्वरभक्तिको मूल भावनाबाट छायावाद केही हदसम्म प्रभावित थियो । त्यसैको थोरबहुत प्रभाव देवकोटामा पनि परेको देखिन्छ । देवकोटाको प्रभावमा छायावाद आइसकेपछि नेपालीमा स्वच्छन्दतावाद धारा कहलिएको हो । नेपाली साहित्यमा स्वच्छन्दतावादी धाराको प्रारम्भकर्ता पनि देवकोटालाई नै मानिन्छ र उनी नै यस धाराका केन्द्रीय प्रतिभा पनि हुन् ।
छायावादको अनुकरण हो स्वच्छन्दतावाद कि अनुवाद हो भन्ने विषयमा बहस गर्न सकिन्छ । कतिपयले छायावादकै नेपालीकरण अर्थात् नेपाली मौलिक विशेषतासहितको छायावाद नै स्वच्छन्दतावाद हो भनेका छन् ।
मुक्तक गीति शैली अर्थात् वैयक्तिकता, भावात्मकता, साङ्गीतिकता, संक्षिप्तता, कोमलताका साथै प्रतीकात्मकता, प्राचीन एवं नवीन अलङ्कारहरूको प्रचुर मात्रामा प्रयोग, मानवीकरण, विरोधाभास तथा कोमलकान्त संस्कृतमय शब्दावलीलाई छायावादका विशेषता मानिएको पाइन्छ । छायावादको विषयमा त्यत्ति धेरै प्रकाश पारिएको पाइन्न जति धेरै स्वच्छन्दतावादको विषयमा चर्चा गरिएको पाइन्छ । नेपाली काव्यधारामा पनि स्वच्छन्दतावाद सबैभन्दा बढी चर्चा गरिएको साहित्यिकवाद हो ।
हुनत देवकोटा कवि हुन् । अझ उनलाई सबैले कवि भनेर चिन्दछन् । तर उनी कवि नभएका भए के हुन्थे ? भनेर प्रश्नको जवाफ खोजी गर्ने हो भने निबन्धकार आउँछ उत्तरमा । हो, उनी निबन्धकार कहलाउँथे । अहिलेसम्म नेपाली साहित्यमा महानिबन्धकार कसैलाई किन भनिएको छैन भने देवकोटाको निबन्धात्मक उचाइ बराबरको निबन्ध अरू कसैले लेख्नै सकेनन् । हो, अमूर्त निबन्धलेखनमा शङ्कर लामिछानेले निकै ठूलो उचाइ प्राप्त गरेका छन्, यसमा कसैको विमति छैन तर देवकोटाको निबन्धको उचाइसित कसैको तुलना नै गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क पनि कमजोर होइन । सर्वसाधारणले पनि देवकोटालाई महाकविको रूपमा स्वीकार गरेकोले पनि उनी महाकविमा सीमित भएका हुन् । हो, देवकोटालाई महाकविमा सीमित गरिएको पनि भन्छन् किनभने देवकोटा काव्य क्षेत्रका मात्र महान् सर्जक थिएनन् । उनको सिर्जनाको आयाम नेपाली साहित्यमा तत्कालीन अवस्थामा प्रचलनमा रहेका प्रायः सबैजसो विधासम्म पैmलिएको हुनाले उनलाई महासाहित्यकार किन नभन्ने ? भन्नेतर्पm यदाकदा उठ्ने गरेका छन् ।
हुनत साहित्यको पर्यायको रूपमा कवितालाई पहिले नलिइएको होइन । काव्य भनेपछि कविता मात्र नबुझेर सम्पूर्ण साहित्य नै बुझिने युग पनि थियो । यस कारण कवि भनेपछि कविता लेख्ने मात्र नबुझेर साहित्यको जुनसुकै विधामा कलम चलाउने हुन् भनेर बुझिन्थ्यो । आजसम्म पनि यस धारणाबाट हाम्रो समाज पूर्णरूपमा मुक्त हुन सकेको छैन । कवि भनेर सम्पूर्ण साहित्यसर्जकलाई बुझाउनुलाई अस्वाभाविक पनि मानिन्न । साहित्यकारहरूले पनि यसलाई स्वीकार गरेको पाइन्छ । यस तर्कको आधारमा देवकोटालाई महाकवि भन्नु महासाहित्यकार मान्नु पनि हो ।
यदि स्वच्छ शब्दको अर्थ सफा र मनमोहक हो भने देवकोटाको परिचय निरन्तर स्वच्छन्द विस्तार भइरहेको छ । देवकोटाको परिचयलाई कुनै छायाले छेक्न सकेको छैन । कसैले छेक्ने प्रयास पनि गरेको छैन । देवकोटाका समकालीनहरूमध्ये शायदै कसैले उनको आलोचना गरेका होलान् । यसको विपरीत देवकाटाका समकालीन तथा अग्रज साहित्यकारसमेतले उनको गर्नुसम्म प्रशंसा नै गरेका छन् । देवकोटाको प्रशंसाले देवकोटाको आयामलाई विस्तार गरेको हो जस्तो लाग्दैन । बाध्यतावश देवकोटाको प्रशंसा गरेका उदाहरणहरू पर्याप्त छन् । देवकोटाको आलोचना गर्न नसकेर पनि प्रशंसा गरेका हुन् ।
वास्तवमा साहित्यको क्षेत्रमा भर्खर लागेकाहरूले अग्रजहरूलाई सोझो प्रश्न गर्दछन् कि मैले कुनै एकजनाको दुई/चार वटा कृति पढ्नु पर्दा पहिले कुन साहित्यकारको कृति पढूँ ? तब सजिलै जवाफ दिन बाध्यता हुन्छ कि देवकोटाको । हो, यदि प्रश्नमा अरू केही विशेषण थपिएको छ भने त्यसको उत्तर फरक आउन सक्ला तर देशको नेपाली भाषाको सबैभन्दा ठूलो साहित्यकार, देशको सर्वोत्कृष्ट साहित्यकार तथा सर्वोच्च साहित्यकारको रूपमा कसैले आपूmलाई वा देवकोटाबाहेक अन्यलाई चिनाउने हिम्मत गरिहाल्ने अवस्था आएको छैन ।
देवकोटाको भौतिक देहावसान भएको पचासौं वर्ष बितिसकेको भएपनि उनको ठाउँमा, उनको साहित्यिक उचाइको ठाउँमा, उनलाई छायामा पार्ने गरी कोही आउन नसक्नुमा देवकोटाको समर्पण, त्याग र साहित्यमा भएको लगानी नै हो । देवकोटा अद्वितीय प्रतिभाका थिए । उनी नेपाली साहित्यका वरदान नै थिए । साहित्य उनको जीवन थियो । यसैले उनी आप्mनो जीवनजस्तै साहित्यमा पनि बग्दै गए । उनको प्रतिभाको विस्तार हुँदै गयो । साहित्यमा विचारको परिमार्जन हुँदै गयो । हुन सक्छ प्रारम्भमा देवकोटालाई साहित्यले चिनाएको होला तर नेपाली साहित्यलाई देवकोटाले चिनाएका हुन् । देवकोटाको लेखनको स्तरले नेपाली साहित्यको स्तरवृद्धि भएको हो । उनको लेखनीले नेपाली भाषाको स्तरमा पनि वृद्धि भएको हो । नेपाली साहित्यको मान र सम्मान विश्वमा वृद्धि भएको हो ।
देवकोटाले धेरै कृति लेखे । धेरै कृति लेख्नु ठूलो कुरो होइन । कृतिको सङ्ख्या अन्य साहित्यकारको पनि धेरै हुन सक्छ । ती कृतिले नेपाली साहित्यमा दिएको योगदान तथा नेपाली समाजले प्राप्त गरेको उपलब्धिसमेतलाई पनि विचार गर्नुपर्छ । देवकोटाको मुनामदन कृति नेपाली साहित्यमा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी बिक्री हुने पुस्तकको रूपमा रहेको छ ।
देवकोटाको जन्म केका लागि भएको थियो ? सम्भवतः अध्यात्मवादीहरूले यस प्रकारको पनि उत्तर दिन सक्लान्– उनी साहित्यकै लागि जन्मिएका थिए ।
नेपाली साहित्यमा छायावादको प्रवेश, स्वच्छन्दतावादको उन्नयन तथा प्रगतिवादी साहित्यको प्रवद्र्धनमा देवकोटाको योगदान नेपाली साहित्यको अमूल्य सम्पत्तिको रूपमा रहेको छ ।